Asehon’ny Mpaka Sary Anao izany hoe Ahoana ny Mandeha Fiarandalamby Ao Singapaora Feno dia Feno izany · Global Voices teny Malagasy
Asehon'ny Mpaka Sary Anao izany hoe Ahoana ny Mandeha Fiarandalamby Ao Singapaora Feno dia Feno izany
Voadika ny 05 Avrily 2015 10:30 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Ελληνικά, čeština , polski, русский, Español, 日本語, македонски, English
Hatramin'ny 2011, ny mpakasary Edwin Koo no nanapika ny sarin'ireo mpandeha ny MRT (ny “Mass Rapid Transit” na Fifindran'ny Vahoaka Malaky) ao Singapaora “handokoana ny sarintava miaraka ao amin'ny fiaraha-monina”
Ny tena miavaka dia ny “fanapihany ny mpitranga isan'andro eo anoloan'ny varavaran'ny fiaran-dalamby” izay anerena ny olona “hisisika” nohony fahamaroan'ny olona ao amin'ny fiaran-dalamby. Tokotokony ho 2,8 tapitrisa ny mpandehan'ny MRT ary maro amin'izy ireo no efa nangataka tamin'ny governemanta mba hanatsarana ny raharahan'ny fiaran-dalamby.
Naka ny sarin'ireo olona izay asisika eo amin'ny varavaran'ny fiaran-dalamby aho hampisehoana ny fihenjanan'ny toe-draharaha. Ireo sary ireo dia teraka tamin'ny likiliky sy ny ‘fanandevozana”.
Tsy mitsaha-miova ny tranga asehon'ny fiaran-dalamby isaky ny misokatra na mikatona ny varavarana, mampiseho ireo mpandray anjara mety hahaliana, fiainana isan-karazany ary taranjam-pihetsehampo. Asehon'ny fakantsary ahy ny mety ho tsy tsipalotry ny masolo – sarintava iraisan'i Singapaoro, tsy mitsaha-mifindra.
Nanazava i Edwin hoe nahoana izy no nipika sarin'olon-tsy fantatra ary niangavy ireo namana mpiara-mifindra aminy halala-tsaina :
Izay no natioran'ny tetikasa: bodo, miserana, tsy miverina indroa, tsy averina indray – hatramin'izao. Ny sary vita, na amin'ny lafiny iray na amin'ny lafiny hafa, dia izaho sy ianao.Mpifindra avokoa isika rehetra, ny 2,8 tapitrisa amintsika.
…Sarim-pifindrana tsy natao ho fankaherezan-tena, tsy fiadian'ny fanaovan-dratsy,ary tsy fitaovana fimenomenonana eo noho eo. Sarintava iraisan'ny fiaraha-monina iainantsika ankehitriny ireo.
Indreto ny sary sasantsasany amin'izay navoakan'i Edwin tao amin'ny Facebook:
Hatambatra ao amin'ny boky iray mitondra ny lohateny hoe Transit [fifindrana] hivoaka amin'ity herinandro ity ny sarin'i Edwin. Nanome antoka ny mpamaky izy fa tsy haka tombombarotra amin'ny boky.
Ny sary rehetra dia avy amin'i Transit, nahazoana alalana. Mety ho esorina ny sary sasantsasany raha takian'ny mpandeha |mpifindra] MRT izany.